jidka tareenka ee Itoobiya iyo Jabuuti oo dakhli badan dhaliyey – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA jidka tareenka ee Itoobiya iyo Jabuuti oo dakhli badan dhaliyey
Wadada Tareenka ee isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti ayaa diiwaan galisay in kabadan boqolkiiba 51 dakhli koror intii lagu jiray qeybtii hore ee sanadka 2020 inkasta oo dhibaatooyin ay keeneen Cudurka faafa ee COVID-19, sida ay jimcihii maareyntu sheegtay.
Wadada tareenka oo dhererkeedu yahay 756-km, oo si rasmi ah u bilawday howlaheeda ganacsi ee rakaabka iyo xamuulka labadaba inta udhaxeysa caasimada dalka Itoobiya ee aan bad laheyn ee Addis Ababa iyo dekedaha kuyaala dalka Jabuuti bishii Janaayo 2018, waxay gacan weyn ka geesatay ka faaideysiga baahiyaha gaadiidka ee Itoobiya dhanka wadanka ay deriska yihiin ee Badda Cas ee Jabuuti.
Qandaraas laba shirkadood oo Shiineys ah, tareenka, oo loo arko inuu yahay kii ugu horreeyay Afrika ee si buuxda koronto u xira, wuxuu sameeyay “horumar isdaba-joog ah” tan iyo markii uu howlaheeda bilaabay Janaayo 2018, sida laga soo xigtay tirooyinka Shirkadda Tareenka ee Itoobiya iyo Jabuuti.
Dakhliga tareenka ayaa kordhay 45 boqolkiiba sanadka 2019 marka la barbardhigo sanadkeedii ugu horreeyay ee 2018, halka dakhligiisa uu sidoo kale kor u kacay 51.38 boqolkiiba qeybtii hore ee 2020 marka la barbardhigo isla muddadaas 2019 inkasta oo dhibaatooyinka ay keeneen COVID-19 , ayaa la xusay.
Adeegyadeeda sii ballaaranaya, tareenka wuxuu bishii Ogosto sidoo kale bilaabay adeegga tareenka ee la qaboojiyey, kaas oo khudradda iyo khudradda Itoobiya looga iibin doono Yurub iyo qaybaha kale ee adduunka.
Wadada tareenka, waxaa hada maamula shirkad shiino ah oo China ah mudo dhan 6 sano.
Sida laga soo xigtay xafiiska maareynta wadajirka ah ee Shiinaha, tas-hiilaadka dheeriga ah ee lagu rakibo jidka tareenka ee Itoobiya iyo Jabuuti ayaa la hagaajinayaa, waxayna kobcinayaan mustaqbal wanaagsan.
Tareenka isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti ayaa hada bixiya noocyo kala duwan oo ah adeegyo xamuul ah oo ay ka mid yihiin daabulida badeecooyinka hallaabi kara, gawaarida, badarka iyo Bacriminta xarumaha Istaarada Indode, Mojo, Adama iyo Nagad.
Wasiirka Gaadiidka ee Ethiopia, Dagmawit Moges, ayaa carabka ku adkeeyay in wadada tareenka ee isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti “ay tahay mid muujineysa mashaariicda waaweyn ee sedexda dal ee walaalaha ah: Ethiopia, Djibouti iyo China.”
Previous articleNuxurka Kulan dhexmaray Safiirka midowga Yurub iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare
Next articleRa’iisal wasaaraha cusub oo kulmey mas’uuliyiin kale